Jaaliyada UK Oo Dabdamis Ku Deeqday Duqa Muqdisho
December 27, 2012 | Posted by admin
Waxaa magaalada Birmingham ee dalka Britain lagu qabtay taariikhdu markii ay aheyd 22 Decembar xaflad mahadcelin ah ee la xiriirta deeqdii baabuurta dembidemiska ahayd ee jaaliyadda Soomaalida ee Britain ku deeqday sidii loogu dhoofin lahaa dalka Soomaaliya.
Xafladda waxaa soo abaabulay Golaha Guurtida ee dalka Ingiriiska waxaana lagu qabtay Baar Hilaac ee magaalada Birmingham.
Xiriiriyaha xafladda wuxuu ahaa Maxamad Shariif, waxaana halkaas ka hadlay marti sharaf ka soo qayb gashay xafladda, waxaana halkaas ugu horrayn waxaa xafladda wacdi diini ah ka soo jeediyay Shiikh Cusmaan oo ka hadlay muhiimadda ay saddaqadu leedahay iyo sida loogu baahan yahay in loo kaalmeeyo dadka ku dhibaataysan dalka hooyo.
Guddoomiye ku xigeenka golaha guurtida Soomaaliyeed Xaaji Macow ayaa isna halkaas ka soo jeediyay sida golaha guurtidu uga shaqeeyo kaalmaynta iyo horumarinta Soomaalida ee gudaha iyo dibadda.
Waxaa kaloo martidii halkaa ka hadashay ka mid ahaa Dr. Cali Maxamad Xuseen(Cali Atam) oo ah ah Agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee xaruunta madaxtooyada Soomalida, wuxuu Dr. Cali ka hadlay xaaladda dalku ku sugan yahay iyo sida loogu baahan yahay in qurbajooggu uga qayb galo horimarinta dalka hooyo.
Intii xafladdu socotay waxaa iyana halkaa ka hadlay Dr. Cabdulqaadir Rumi, Cabdullaahi Ibraahim Casayr, Inginer. Maxamad Islaw oo ah gudomiyaha ururka dhallinyarada ee Birmingham UK oo kamid aha qabanqabiyasha soo diray debdamisyada loo diray muqdisho, Qamar Cali ,Qooreey, Xuseen Geedow iyo marti sharaf kale.
Guddomiyaha Guurtida Soomaalida ee UK Shariif Axmadeey ayaa isna xafladda ka soo jeediyay sida golaha guurtidu uga shaqeeyay rarista baabuurta dabdemiska ee Soomalida oo waxtar badan u yeelan doonta shcbiga soomaalida ee deggan xaruunta dalka soomaaliya ee Muqdishow.
Intaas kaddib,waxaa mikroofanka lagu soo dhaweeeyay Mr. Abdulrazak Osman oo ah Right Worshipful Lord Mayor of Leicester oo isna sheegay sida hay’adda Iqra Trust u caawiso dadka dhibaataysan ee dunida. Maayarka magaalada Leicester wxuu sheegay inay kaalmayn doonaan dadka Soomaalida ee ku dhibaataysan dalka. Maayarku wuxuu kaloo xusay kulaanadii uu la qaatay duqa magaalada Muqdishow, Maxamuud Nuur (tarzan) iyo sida loogu baahi qabo inay iska kaashadaan arrimaha horumarina bulshada Soomaalida.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Nuur (Tarzan) ayaa isna khadka teleefanka kaga qayb galay xafladda,wuxuuna u mahad celiyay maayarka leicester iyo Golaha Guurtida Soomaalida ee UK siday uga shaqeeyaan arrimaha baabuurta dembidemiska ah loogu talagaly horumarinta adeegyada bulshada ee dadka gobolka Banaadir, wuxuuna kulanku wuxuu ku soo dhammaaday jawi walaaltinnimo iyo samafal ah.
« Wafdi Heer Wasiiro Ah Ayaa Kismaayo Dowlada U Dirtay
7 qof oo meydadkooda laga helay duleedka Ceelbuur »